ဆေးရုံတှေ ရဲ့ အောကျစီဂငျြ ဘယျကရ သလဲ? – Let Pan Daily
ဆေးရုံတှေ ရဲ့ အောကျစီဂငျြ ဘယျကရ သလဲ?
ကတြျောတို့ မဆေ့ေးနဲ့ ICU Intensivist ဆရာဝနျမြား အတှကျ အဆနျးတကယျြမဟုတျပမေယျ့ အခွား အရပျဖကျပွညျသူမြား အတှကျ ဗဟုသုတ ဖွဈဖို့ ဆေးရုံတှအေတှကျ အောကျစီဂငျြ ထုတျပေးနိုငျတဲ့ နညျး မြား ကို တငျပွပေးအပျပါတယျ။ ကတြျောတို့ ဆေးဝနျထမျးမြား ပငျ ကိုယျ့ဆေးရုံ ရဲ့ အောကျစီဂငျြ ဘယျ က ရသလဲ။ မစပျစု တတျတာ လညျး အံ့ဩ မိပါတယျ။
ကိုးဗဈကာလ အောကျစီဂငျြ အမြားအပွားသုံးစှဲ နိုငျဖို့ ကုတငျ 50 ဆေးရုံ‌လောကျ က အစ အောကျစီဂငျြ အလုံအလောကျ ရှိနဖေို့လိုပါတယျ၊အောကျစီဂငျြ ရငျးမွဈမရှိ ပါပဲ အခွားဘာရှိရှိ အလုပျမဖွဈပါ။ Oxygen is not the gas, but the essential Drug ပါ။ အောကျစီဂငျြ ဟာ မရှိမဖွဈ ဆေးဝါး ပါ။
1.အလှယျဆုံးက တော့ အိုးတှေ အမြားကွီး ခြိတျဆကျသှယျတနျးထား တဲ့ Oxygen Cylinder Manifold System ပါ။
ခှဲခနျး လူနာ ခနျး နဲ့ အပွငျ အဝေးမှာ သီးခွား အဆောကျအဦ နဲ့ ထားရပါမယျ။ Sizeကွီးအိုးမြား ကို အနညျးဆုံး တဖကျ 10လုံး လောကျ ဘယျ ညာ ဆကျသှယျ ထားတဲ့စနဈပါ။ ဘယျတနျးက အိုး တှကေုနျရငျ ညာတနျး ဖှငျ့ ဘယျတနျးက အိုးတှေ အသဈလဲ၊ ညာကုနျ ဘယျ ပွနျဖှငျ့ ညာအိုးတှေ လဲ။ ဒီနညျးက ရှေးဟောငျး နညျး မီးမလိုပါဘူး။ စောငျ့ကွညျ့ဖို့ လူ ၊ သယျယူစရာ ကား ၊ Oxygen Regulator အိုး ကွီးတှေ ရငျးနှီးရပါမယျ၊ အိုး လေး တှေ ဖွညျ့ ဖို့ ပိုကျခေါငျး ဆောငျထားရငျ ခရီးတို လူနာအသယျအပို့ ဝနျဆောငျမှုပေးနိုငျပါမယျ။ (ဒါပမေယျ့ သိသလောကျ ဆေးရုံ အလတျ မြားဟာ အိုးကွီး ၂ လုံး ၃ လုံး နဲ့သာ စခနျးသှားနကွေပါတယျ။)
2.oxygen Generator စကျကွီးမြားပါ။
လထေဲ က Nitrogen + Oxygenရောနတေဲ့ ရိုးရိုးလကေို လစေုပျစကျနဲ့ စုပျသှငျးပွီး Nitrogen ဖယျ စဈနိုငျတဲ့ Zeolites Chamber တှထေဲဖွတျ ပွီး Oxygen ခညျြးသကျသကျ ကို လအေိုး ထဲ မောငျးထညျ့၊ ထိုမှ တဆငျ့ Oxygen Cylindersထဲ ထညျ့ခငျြထညျ့ စု၊ သို့မဟုတျ ဆေးရုံ ပိုကျလိုငျးစနဈထဲ ထညျ့တဲ့စကျနဲ့ ပိုကျလိုငျးစနဈပါ။ ထိုစကျ ကတော့ ကုမ်မဏီ အလိုကျဈေး နဲ့ ဝနျဆောငျမှုစရိတျ အမွဲ ရှိနေ ပါမယျ။ လြှပျစဈမီး မပွတျလိုပါတယျ။ မီးစကျအကွီး ထိုငျထားကွရပါမယျ။ အိုးကွီးတှထေဲလညျး စု ထား ဖို့ လိုသလို Cylinder Manifold System နဲ့ ခြိတျဆကျ ထားလေ့ ရှိပါတယျ။ အတနျကွီးတဲ့ ကုတငျ 100ဆေးရုံတိုငျးမှာ အနညျးဆုံး ၂ လုံး (တလုံးပကျြ တလုံးမောငျး၊ ပကျြတဲ့အလုံးပွငျ ၊) ရှိထားသငျ့တာ တော့ ကွာပါပွီ၊
3. Liquid Oxygen Plant (Liquid Oxygen Vacuum Insulated Evaporator) VIE
ကျတော်တို့ မေ့ဆေးနဲ့ ICU Intensivist ဆရာဝန်များ အတွက် အဆန်းတကျယ်မဟုတ်ပေမယ့် အခြား အရပ်ဖက်ပြည်သူများ အတွက် ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖို့ ဆေးရုံတွေအတွက် အောက်စီဂျင် ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်း များ ကို တင်ပြပေးအပ်ပါတယ်။ ကျတော်တို့ ဆေးဝန်ထမ်းများ ပင် ကိုယ့်ဆေးရုံ ရဲ့ အောက်စီဂျင် ဘယ် က ရသလဲ။ မစပ်စု တတ်တာ လည်း အံ့ဩ မိပါတယ်။
ကိုးဗစ်ကာလ အောက်စီဂျင် အများအပြားသုံးစွဲ နိုင်ဖို့ ကုတင် 50 ဆေးရုံ‌လောက် က အစ အောက်စီဂျင် အလုံအလောက် ရှိနေဖို့လိုပါတယ်၊အောက်စီဂျင် ရင်းမြစ်မရှိ ပါပဲ အခြားဘာရှိရှိ အလုပ်မဖြစ်ပါ။ Oxygen is not the gas, but the essential Drug ပါ။ အောက်စီဂျင် ဟာ မရှိမဖြစ် ဆေးဝါး ပါ။
1.အလွယ်ဆုံးက တော့ အိုးတွေ အများကြီး ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းထား တဲ့ Oxygen Cylinder Manifold System ပါ။
ခွဲခန်း လူနာ ခန်း နဲ့ အပြင် အဝေးမှာ သီးခြား အဆောက်အဦ နဲ့ ထားရပါမယ်။ Sizeကြီးအိုးများ ကို အနည်းဆုံး တဖက် 10လုံး လောက် ဘယ် ညာ ဆက်သွယ် ထားတဲ့စနစ်ပါ။ ဘယ်တန်းက အိုး တွေကုန်ရင် ညာတန်း ဖွင့် ဘယ်တန်းက အိုးတွေ အသစ်လဲ၊ ညာကုန် ဘယ် ပြန်ဖွင့် ညာအိုးတွေ လဲ။ ဒီနည်းက ရှေးဟောင်း နည်း မီးမလိုပါဘူး။ စောင့်ကြည့်ဖို့ လူ ၊ သယ်ယူစရာ ကား ၊ Oxygen Regulator အိုး ကြီးတွေ ရင်းနှီးရပါမယ်၊ အိုး လေး တွေ ဖြည့် ဖို့ ပိုက်ခေါင်း ဆောင်ထားရင် ခရီးတို လူနာအသယ်အပို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါမယ်။ (ဒါပေမယ့် သိသလောက် ဆေးရုံ အလတ် များဟာ အိုးကြီး ၂ လုံး ၃ လုံး နဲ့သာ စခန်းသွားနေကြပါတယ်။)
2.oxygen Generator စက်ကြီးများပါ။
လေထဲ က Nitrogen + Oxygenရောနေတဲ့ ရိုးရိုးလေကို လေစုပ်စက်နဲ့ စုပ်သွင်းပြီး Nitrogen ဖယ် စစ်နိုင်တဲ့ Zeolites Chamber တွေထဲဖြတ် ပြီး Oxygen ချည်းသက်သက် ကို လေအိုး ထဲ မောင်းထည့်၊ ထိုမှ တဆင့် Oxygen Cylindersထဲ ထည့်ချင်ထည့် စု၊ သို့မဟုတ် ဆေးရုံ ပိုက်လိုင်းစနစ်ထဲ ထည့်တဲ့စက်နဲ့ ပိုက်လိုင်းစနစ်ပါ။ ထိုစက် ကတော့ ကုမ္မဏီ အလိုက်ဈေး နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် အမြဲ ရှိနေ ပါမယ်။ လျှပ်စစ်မီး မပြတ်လိုပါတယ်။ မီးစက်အကြီး ထိုင်ထားကြရပါမယ်။ အိုးကြီးတွေထဲလည်း စု ထား ဖို့ လိုသလို Cylinder Manifold System နဲ့ ချိတ်ဆက် ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ အတန်ကြီးတဲ့ ကုတင် 100ဆေးရုံတိုင်းမှာ အနည်းဆုံး ၂ လုံး (တလုံးပျက် တလုံးမောင်း၊ ပျက်တဲ့အလုံးပြင် ၊) ရှိထားသင့်တာ တော့ ကြာပါပြီ၊
အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထား သင့်တဲ့ အချက်များ
ဘယျခတျေလောကျက စ၍ မွနျမာလူမြိုးတှေ ကှမျးဝါး ခဲ့ကွသလဲ
“မိမိရှာနိုင်သလောက် ငွေ ကို မကုန်အောင် သုံး တဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) ခု ။
ခြောက်တာ မဟုတ်ပါ ကောလဟလ ဖျန့်တာ မဟုတ်ပါ… ဝက်သား သတိထား ဝယ်ကြ စားကြပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ …